Xaaladaha Guud ee Sale - Rikoooo
Xaaladaha Guud ee Sale of Rikoooo.com
Website-kani www.Rikoooo.com waa hantida is-qandaraasle Bender Erik (halkan loogu yeeri sida Rikoooo), kuwaas oo ka diiwaan gashan xafiiska waa at 107 dekedda chemin de dekedda, 31410 Nuux, ka diiwaangashan yahay Diiwaanka Ganacsiga iyo Shirkadaha ku hoos tirada Siret ah 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Ujeedada ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha sale guud waa in la qeexo shuruudaha iyo xaaladaha iyo shuruudaha hoos oo iibka dhexeeya Rikoooo iyo macaamiisha ay soo gabagabeeyey on website this. ansaxinta ee icon awood iibsadaha si uu u noqdo qof aqoon u leh iyo in ay u hoggaansamaan shuruudaha guud joogo ee sale koobnaan doonaa oggolaansho soo noqosho iyo kama dambaysta ah ee uu ka qayb on dhammaan qodobada ku jira shuruudaha guud ee sale.
Qodobka 1 - Ujeedada iyo baaxadda
1.1- Kuwani xaaladaha guud ee sale adkaan badan dokumenti kasta oo kale oo wax iibsadaa, iyo gaar ahaan on kasta oo xaaladda guud ee iibka, haddii express iyo heshiiska ka hor yaraysto ee Shirkadda.
1.2 - Kuwani xaaladaha guud ee sale waxay khuseeyaan dhammaan iibka alaabta by Shirkadda ay website haddii heshiis gaar ah ka hor inta aan si lagu heshiiyay oo qoraal ah oo u dhexeeya labada dhinac.
1.3 - dukumenti kale oo kasta oo ka badan, kuwaas oo xaaladaha guud ee sale iyo haayaha gaar ah, prospectuses, xayaysiisyada, ogaysiisyada, waa kaliya muujinaysaa, non-heshiis. The sawiro iyo naqshadeynta bandhigay website-ka waa muujinaysaa oo keliya oo ma galaan mas'uul ka ah iibiyaha.
Qodobka 2 - Hantida Garasho
qoraalka oo dhan, comments, sawirada iyo images soo saari on goobta www.Rikoooo.com waxaa loo hayaa oo waa hantida gaarka ah ee Rikoooo ama qeybiyeyaasha ay yihiin kuwo la ilaaliyo oo hoos copyright iyo hantida aqooneed ee dunida oo dhan Oo naqshado, lagu daydo, shatiyada, qorshayaasha iyo guud ahaan dhammaan dokumentiyada ee nooc kasta oo ka samatabbixiyey ama diray by Rikoooo in macaamiisha waa hantida gaarka ah ee Rikoooo ama qeybiyeyaasha ay.
Qodobka 3 - Amarada
3.1 - Products bixiyey for sale by Rikoooo yihiin kuwa soo bandhigay on www.Rikoooo.com iyo sifooyinka muhiimka ah oo halkan lagu tilmaamay. Iyadoo la tixraacayo Qodobka L. 111-1 of Code Consumer ah, taas oo dhigayaa in "xirfad kasta oo alaabta ama adeegyada iibiya doonaan, ka hor inta aan la soo gabagabeeyo heshiiska, meel macaamilka boos ah in la ogaado sifooyinka muhiimka ah ee badeecada ama adeegyada ", shirkadda Rikoooo kuu ogolaanayaa macaamiisha ah, ka hor meelaynta si kasta, si ay u dalbi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabta, kuwaas oo telefoon ama email, at tiro muuqashada in Distoorka oo ka mid ah shuruudaha guud ee sale.
Rikoooo fuliya si ay u siiyaan macaamiisha wixii macluumaad dheeraad ah oo laga yaabaa in uu jeclaan lahaa in la helo hadii uusan ka fiirsan isaga qudhiisa ku filan wargeliyay by ah description iyo sifooyinka of badeecada iibin on site kor ku xusan.
Si kastaba ha ahaatee, waa masuuliyada qofka macaamiisha ah si loo xaqiijiyo in waxyaabaha ku amreen dhigmaan baahida iyo caga, macaamiisha oo keliya ayaa masuul ka ah waafaqsan ee alaabta si ay isticmaalka loogu talagalay taas oo waxaa loogu tala galay isagoo.
3.2 - Nidaamyada duubo Automatic waxaa loo arkaa in ay cadeyn nooca, content iyo taariikhda amarka. Rikoooo Xaqiijiyay aqbalaada ee ay si ay macaamiisha ee cinwaanka e-mail in ay ku gaadhsiiyo doonaa. sale kaliya ee lagu soo gabagabeeyay doonaa ka dib xaqiijin amarka.
Rikoooo xaq u leedahay inay joojin kasta oo si ka macaamiisha ah kuwaad kula jiro muran la xiriira bixinta amarka hore. Macluumaadka ku xusan by iibsadaha, marka la qaadanayo amar, kasbada macaamiisha ah: in kiiska qalad in qaataha ee faahfaahinta cinwaanka, iibiyaha aan la qaban karaa masuul ka ah adagtahay ee bixinta badeecada.
3.3 - Rikoooo xaq u leedahay inay wax isbedel ah ama horumar in hoosaadyo loo baahan yahay waqti kasta in waxyaabaha ay, oo aan taas innagoo xaq laynagaga dhigay macaamiisha ah, diidmada aqbalaada iyo xaq u leedahay inay Waqtiga tirka mid ka mid ah waxyaabaha muuqashada on ay website, tirtirka tani ma dhacdo in kasta oo cudurdaar u noqon kara on qayb ka mid ah macaamiisha ah, qaar ka mid ah magdhow ku jira. Haddii badeeco ahaayeen in la tirtiray iyo macaamiisha ma u doonaynin inuu dooran wax soo saarka kale oo isku mid ah ama, uu si la tirtiri lahaa ipso iyo is-huwanaanshaha lacagaha ka dhigay noqon lahaa celin.
qurbaannada saarka Rikoooo ayaa waxaa laga heli karaa gudahood xadka of kaydka la heli karo iyo waxyaabaha aan ku kaydsan goobta Rikoooo ee, ku xiran helitaanka qeybiyeyaasha ay, kuwaas oo ka baxsan kontoroolka ee Rikoooo. Lacala haddii alaabta ka dib u geliya amarka, Rikoooo fuliya si loogu wargeliyo macaamiisha sida ugu dhaqsaha badan, by mail, internetka ama e-mail. macaamiisha ayaa markaas joojin kartaa inuu si iyo Rikoooo isaga u soo celin doonaa, sida ugu dhakhsaha badan, wadarta wax in ay soo ururiyay laga yaabaa inuu ka macaamiisha ah.
unavailability kasta oo badeecada, sabab kasta ha, in kiiska ma siin karaan kor u bixinta by Rikoooo of magdhow qaar ka mid ah iyo danaha ama kharashyada qaar ka mid ah dabeecadda waxay doonto ha noqotee.
Qodobka 4 - keeno
bixinta ee hantida dhejisa la sameeyo isla markiiba ka dib ansixinta ee bixinta.
Qodobka 5 - Price
Qiimaha iibka ee badeecada go'an yihiin by canshuur ee ciidanka maalinta ugu hooseysaa dhanka of amarka. Rikoooo xaq u leedahay inay ka beddeli qiimaha ay waqti kasta oo ay dhacdo kala duwanaansho of qiimaha, qiimaha ay khuseyso noqon doonaa kuwa saamaynta on taariikhda soo dhawaynta ah ee amarka.
The qiimaha iyo qiimaha ku qoran www.rikoooo.com waxaa laga soo xigtay in euro oo ka mid ah VAT. Waxay yihiin saafiga ah ee wax-dhimis iyo marka laga reebo bixinta ama maraakiibta kharashka.
Qodobka 6 - Payment
bixinta ee wax soo saarka oo hagaaji on www.rikoooo.com goobta lagu sameeyo lacag caddaan on si ay Paypal ama 2Checkout (CB) ama hubi.
6.2 - Non-bixinta / haynta ee horyaalka lagu burburin karo
dhacdo kasta oo lacag fasaxayaa doonaa Rikoooo in ay joojiso fulinta oo dhan amarada fiican ee macaamiisha, iyada oo aan dambaysta ah ay awoodaan in ay sheegan Dhibaato kasta ama indemnities nooc kasta. Intaa waxaa dheer, wax iibsadaa celiso waa Rikoooo dhan kharashka uu galay ee la soo kabashada ee wadaraha la bixin, oo ay ku jiraan qaansiin ah hal mar ee 10% hormarsataan mudan, iyada oo aan loo dhimayn magdhow kasta oo kale oo xiiso.
Marka badeecada iibin aan mushaarka buuxa waqtiga dhalmada, Rikoooo waxay meel hanti ah ilaa lacag ka buuxaan qiimaha maamulaha iyo accessories u dhiganta, lacagta gudahood macnaha lagu burburin karo this iyagoo laga garto Price ururinta by Rikoooo ah. In case of maalmood 8 default ka dib warqad ogeysiin ah oo rasmi ah by warqad diiwaangashan diray mahad celin la helo oo aan lagu guulaysan, iibka waa la tirtiri doonaa sida saxda ah haddii wanaagsan u muuqataa in Rikoooo eexashola'aan in dhaawac iyo dano kale oo kasta.
Qodobka 7 - Guarantee cilladaha muuqata oo qarsoon
Rikoooo balanqaadayo in waxyaabaha ay u hoggaansamaan xeerarka Faransiis iyo Yurub in ciidamo iyaga ku saabsanaa, sida ay ka jiraan.
Qodobka 8 - macluumaad NOMINATIVE
Rikoooo fuliya aan la xiriiro in labada dhinac saddexaad macluumaadka lagu kala qaado, waxa uu by macmiilka, kaas oo ah mid qarsoodi ah. Macluumaadkan waxaa kaliya loo isticmaali doonaa by adeegyada gudaha Rikoooo si loo farsameeyo si macaamiisha ah ee. Sida waafaqsan Xeerka Ilaalinta Macluumaadka ee 6 January 1978, macaamiisha ah wuxuu xaq u leeyahay helitaanka, sixitaan iyo mucaaradka in ay xogta shakhsiga ku saabsan isagii. Si arrintan loo sameeyo, waxa ku filan si aad u dalbato internetka ama boostada, la tilmaamayo magaca, magaca hore, cinwaankaaga iyo, haddii ay suuragal tahay, tixraaca macaamiisha.
Qodobka 9 - Force majeure
Rikoooo la gargaartay laga yaabaa in dhammaan ama qayb ka mid ah waajibaadkeeda aan awoodin in ay sheegan wax magdhow ka dhacdo duruufo lama filaan ama majeure ciidanka ka hortagga ama daahiyaan hawshooda u ah ee wax soo saarka ama qaar ka mid ah xubno ay.
Haddii ay dhacdo waxay qaadataa in ka badan soddon maalmood laga bilaabo taariikhda ay dhacdo, heshiiska iibka soo gabagabeeyey by our shirkadda iyo macaamiisha la joojin laga yaabaa in ay qayb ka ugu dadaala, oo aan wax ka mid ah dhinacyada ku sheegan karaa magdhow. baajinta Tani hirgalin doono taariikhda soo bandhigidda hore ee warqadda diiwaan gashan AR canbaareeyay heshiiska ayaa sheegay in iibka.
Qodobka 10 - Awooda
By heshiis express u dhexeeya labada dhinac, Maxkamadda Ganacsiga ee xarunta noo noqon doonaa oo keliya ayaa masuul ka ah wax kasta oo khilaaf ah ama wax dacwad la xidhiidha dhismaha, fulinta ama fasiraad ka mid ah shuruudaha guud ee sale iyo hawlaha oo dhan Sales alaabta Rikoooo. Kuwani xaaladaha guud ee sale oo dhan iibka by Rikoooo sameeyey ku xiran yihiin sharciga Faransiis.
Qodobka 11 - Waiver
Xaqiiqada ah in Shirkadda ma, waqti kasta siiyey, laftiisa ka faa'ideysto ka mid ah qodobo warkaasu, ma dhaafi kartaa xaq u leedahay in ay ku tiirsan yihiin qodobo kuwaas oo taariikh dambe.